Sidee baan u eegi karaa tartankayga SERP?
Inta badan milkiilayaasha bogga elektarooniga ah waxay ku dadaalaan inay sarreeyaan bogga natiijada raadinta Google. Waxay jeclaan lahaayeen in ay ku jiraan TOP10 Google sababtoo ah waxay keeni kartaa gaadiid la bartilmaameedsanayo oo u beddelaya iibka iyo dakhliga sare. Si loo hagaajiyo jagooyinkaaga darajada, waxaad weli u baahan tahay inaad noqoto mid tayo leh. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah siyaabaha ugu waxtarka badan ee lagu maareyn karo sareeyo islamarkaana kor loo qaado maamulka shabakada waa inuu leeyahay dib-u-qiimeyn qiimo leh - lierac serum magnificence. Qodobkani, waxaan ku siin doonaa talooyin ku saabsan sidii aad u hanan laheyd oo aad u hubin lahayd tartanka SERP oo si sharci ah u soo iibsanaya dhinacaaga tartanka.
Waxaa jira laba siyaabood oo aasaasi ah sida loo riixo goobtaada ilaa Google. Midka koowaad waa in la hirgeliyo Google Adwords iyo bixinta qof kasta oo riixaya. Midda labaad waxay tahay in la abuuro olole wacyigelinta raadinta guusha raadinta si loo helo rikoor heer sare ah. Diiwaanka abaabulan waxaa laga heli karaa iyada oo la abuurayo oo daabacayo tayada iyo waxyaabo gaar ah oo ay martidaada kula wadaagi doonaan oo ku xiran yihiin, iyo adoo isku xiraya meelaha kale ee sarreeya ee mawduucaaga.
Haddii aad jeceshahay in aad la socoto natiijo dhaadheer, waa inaad ku maalgelisaa baarista baaritanka baatariga. Waxaa jira laba arrimood oo asaasi ah oo si toos ah saameyn ugu yeelanaya boggaaga SEO - waxyaabaha ku haboon iyo cabitaanka tayada tayada. Backlinks waa joker halkan. Mararka qaar khibrad u leh khibradaha raadinta mashiinka raadinta ma awoodi karaan inaad hesho xiriirka ugu fiican. Waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah internetka oo ku saabsan istaraatiijiyadaha xiriirinta. Si kastaba ha noqotee, waxay ka buuxsamaan macluumaadka aan khuseyn ee laga saari karo. Qodobkan, waxaad ka heli doontaa qaar ka mid ah macluumaadka qiimaha sida sharci ahaan u isticmaalaan tartamayaasha tartankaaga ee kaalmadaada. Ka hor intaanan bilaabin inaan ka hadalno farsamooyinka dhismaha ee isku xirnaanta, waa inaan kuu digo in qadar badan oo ah "xidhiidhada aan" aan sax ahayn "ay sababi karto ganaaxyada raadinta raadinta iyo qiimeynta liiska.
Siyaabaha loo helo taageerada ugu fiican
Su'aasha sida loo helo dib u eegis tayo leh ayaa ah kuwa ugu badan ee la weydiiyo. Jawaabta ugu cad cad ee su'aashan waa SERP ee tartanka 'competitors'. Marna ma geli doontid TOP-ta ilaa mooyee goobtaada si farsamo loo-casuumay, waxay bixisaa maadooyin tayo sare leh iyo khibrad aad u fiican. Si kastaba ha noqotee, haddii aad hesho tan la daboolay, dib u eegis tayo leh ayaa kuu keeni doona booska TOP ee booska SERP.
Si aad u ogaato tartamayaasha suuqyada badan oo ka mid ah milkiilayaasha bogga waxay qabtaan cilmi baarayaasha tartanka. Si kastaba ha ahaatee, waa hab qalad ah oo lagu hubinayo tartanka SERP. Maxay tahay baahida loo qabo in la fiiriyo waa shuruudaha raadinta ee ku haboon ganacsigaaga. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad u kala soocdo tayada ugu sareysa ee tikidhada sare leh ee lagu barto si ay u caawiso darajo sareeya shuruudaha raadinta ugu habboon. Waxaad u baahan tahay inaad diirada saartid tartamayaasha suuqa oo aad ogaatid cidda ku xiriirisa.
Si aad u dhamaystirto hawshan, waxaad u baahan tahay inaad dooratid siddeed ilaa laba erey oo aad raadineysid. Si loo fududeeyo hannaankan, waxaad isticmaali kartaa Qorshaha Ku-Meel-Gaarka ah ee Google (Google Keyword Planner) ama qalabka "Auto Auto SEO". Waxay kaa caawineysaa inaad ku dhexjirto ereyada ugu muhiimsan ee raadinta. Taas ka dib, waxaad si fudud u geli kartaa ereyada muhiimka ah ee lagu soo xulay si aad u taxisid tartamayaashaaga TOP10 ee raadinta dabiiciga ah. Marxaladda xigta, waxaad u baahan tahay inaad qiimeyso tartamayaashaada, iyaga oo siinaya min 1 ilaa 50 dhibcood. Ka dib markaa ku dar dhammaan qodobbada iyo ku dar darajooyinka aad raadineyso. Si aad hawsha u qabato, waxaa laga yaabaa inaad hirgeliso Google Analytics ama Analytics Website-ka. Qalabkani wuxuu ku qiimeyn karaa tartamada SEO-yada oo ku saleysan ereyada muhiimka ah, markaa uma baahnid inaad adigu sameyso. Iyada oo la adeegsanayo qalab isku mid ah, waxaad ka eegi kartaa taageerayaashaada tartanka. Himiladaada ugu muhiimsani waa in la tilmaamo xiriirka ugu qiimaha badnaa ee tartamadaada ugu sareeya.